Umqulu omncane / ophakathi / ophezulu
Ama-PCB wemvamisa yomsakazo
Ama-frequency e-Radio (RF) ama-PCB nama-microwave PCB angatholakala kwimikhiqizo engenazintambo kusuka kumadivayisi aphathwayo wezicelo zezokwelapha nezimboni kuzinhlelo zokuxhumana ngocingo zeziteshi ezisezingeni eliphansi, i-radar nezinhlelo zokubeka umhlaba wonke. Into ebaluleke kakhulu ekukhiqizeni i-rad ...
Noma yiliphi Ibhodi Lesifunda Eliphrintiwe Lwe-HDI
I-HDI PCB ngamabhodi ama-multilayer anokuqina kokuxhuma okuphezulu kunamabhodi ajwayelekile, anezintambo / izikhala ezinhle, ezincane ngezimbobo namaphedi wokuthwebula avumela ama-microvias ukuthi angene kuphela ezingqimbeni ezikhethiwe futhi abekwe nasemapayilini angaphezulu. ...
Isikhathi Sokulungiselela Unyaka Omusha WamaShayina 2021
Iholide lomphakathi lonyaka omusha wase-China lowe-2021 lingoFebhuwari 12 kuya kuFebhuwari 26. Njengoba leli kuliholide lomphakathi kuzwelonke kuthinta konke ukukhiqizwa eChina. Ngaphezu kwalokho, njengoba kusenokungaqiniseki okuningi ngobhadane lwe-coronavirus lomhlaba wonke, nangolwazi lwethu lwangonyaka odlule we-holi ...
I-Electronica South China Exhibition eShenzhen
I-Electronica, enye yemibukiso ehamba phambili embonini ye-elekthronikhi, ivula umcimbi wayo wokuqala eNingizimu China. Umbukiso wezinsuku ezi-3 uqala kusukela ngoNovemba 3, 2020 eShenzhen International Conventional Center entsha sha. I-exhibitio ...
Umkhosi wase-Chinese Mid-Autumn kanye nosuku lukazwelonke
Kulo nyaka umkhosi waseChina Waphakathi Nokwindla kanye nosuku lukazwelonke lwenzeka phakathi nesonto elifanayo; 1st - 7th Okthoba. Njengoba lamaholide angathinta ukukhiqizwa eChina ngamazinga ahlukahlukene, sihlala silungiselela izinhlelo-zokuhlela kanye nawe ukuthola izindlela ezahlukahlukene zokugwema ...
Imijikelezo yePandawill E-ExpoElectronica
ngomphathi ku 19-04-10
IPandawill Circuits, umphakeli oqeqeshiwe we-PCB ne-PCBA ovela eShenzhen China uzokwethula ubuchwepheshe bayo be-PCB nezinsizakalo zomhlangano we-PCB embukisweni omkhulu we-elekthronikhi i-Expoelectronica eRussia. Woza uzohlangabeza uStephen ovela ePandawill Circuits e-A284 ukuzoxoxa ngakho konke ukukhiqiza kwakho kwe-PCB ne-Ass ...
Isevisi Yesakhiwo se-PCB Iyatholakala
ngomphathi ku 19-02-01
Kumakhasimende ethu enani, ukwakheka kwe-PCB nezinsizakalo zokuklama kungenye yezindlela esisiza ngazo amakhasimende ethu ukuthi athengise ngokushesha njengoba ithimba lethu lobunjiniyela linokuhlangenwe nakho okuphawulekayo kwezwe okuklama ama-PCB wokusebenza nokukhiqiza. Ithimba lethu lonjiniyela kanye ne-CAD / CAM opharetha bayatholakala t ...
Unyaka Omusha WamaShayina 2019, Unyaka Wengulube
Iholide Lonyaka Omusha WamaShayina Amaholide Omphakathi Omusha WaseShayina wango-2019 ngoFebhuwari 4 kuya kuFebhuwari 10. Unyaka Omusha WamaShayina yiholide lendabuko elibaluleke kakhulu eChina. Kuyaziwa nangokuthi uMkhosi Wentwasahlobo. Imikhosi Yonyaka Omusha WamaShayina ngokwesiko yaqala kuNyaka Omusha WaseChina ...